ASA SOSIALY ANKATOKY NY FETY : Mijoro ny fikambanana “Ho Maintso ny Tontolo”
Raikitra indray ankehitriny ny karazana asa sosialy isan-karazany amin’izao ankatoky ny fety izao, ataon’ny fikambanana maro isan-tokony. 19 décembre 2016
Mijoro eto Antsirabe ankehitriny ny fikambanana “Ho Maintso ny Tontolo”, izay mpanao asa soa sy hiaro ny tontolo iainana. Nisy avy hatrany ny hetsika ara-tsosialy nataon’ity fikambanana ity ho fampahafantarana ny fisiany sady ho fanampiana sahady ireo kilonga amin’izao fetin’ny Noely izao, ka nisy ny fampisakafoanana ankizy 300 tamin’ny Epp roa dia ny tao Antanambao Est Ivohitra sy ny Epp Ambohimena.
Raha ny fanazavana nomen’ny filohan’ny fikambanana, Razakarivo Armando dia antony nifidianana ny sekolim-panjakana ny fisian’ireo ankizy tena sahirana ao aminy, izay tsy mba misy mpiahy. Eo ihany koa ny fanohizana ny hetsika satria manana tany malalaka azo trandrahana ity sekoly ity ka afaka hanaovana hetsika fiarovana ny tontolo iainana amin’ny famokarana ho an’ny sekoly.
Tanjona ho azy ireo ny fiarovana ny tontolo iainana sy fanabeazana ary ny lafiny sosialy ka hisy ny fanomezana masomboly sy zezika hiatrehan’ireo mpianatra izany asa izany sady efa ho fampianarana ny ankizy ho tia miaro ny tontolo iainana ihany koa.
Nankasitrahan’ireo mpampianatra moa izao hetsika sy asa fanasoavana izao ka naneho fahavononana amin’ny hitohizan’izany sahady izy ireo.